१० वर्षमा १४ अर्ब खर्चेर अर्बपतिले बनाए यस्तो घर:: Naya Nepal
१० वर्षमा १४ अर्ब खर्चेर अर्बपतिले बनाए यस्तो घर
काठमाडौं । मानिसहरु आफ्नो प्रेमको लागि धेरै हदसम्म जाने गर्छन् । विश्वका ठुलाठुला मानिसहरुले आफ्नो प्रेमको लागि विभिन्न भवनहरु निर्माण गरेको कथाहरु सुन्दै पनि आएका छौं ।यस्तै प्रेममा परेका एक व्यक्तिले आफ्नी प्रेमिकालाई एक अनौठो घर उपहार दिएका छन् । उक्त घरको विषयमा यहाँ केही चर्चा गरिएको छ ।एक रुसी अर्बपतिले एक भव्य महल बनाएका छन् । व्लादिस्लाव डोरोनिनको यो घर निकै मनमोहक किसिमले निर्माण गरिएको छ । यो घर एक जंगलको बीचमा रहेको छ र यहाँ एक झर्ना पनि बनाइएको छ । यसमा थ्रीडी सिनेमा रुम, नाइट क्लब, सैलुन, जापानी बगैँचालगायतका सुविधाहरु रहेको छ ।यो घर निर्माणको लागि करिब १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको रकम खर्च भएको थियो । यो घर निर्माणको लागि १० वर्ष लागेको थियो ।
काठमाडौं । कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लडने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दएका छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइरालाले खाने कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार तेलमा तारेर बनाइएको परिकारहरु कम खानुपर्नेछ । बजारमा पाइने चिल्लो, सुकिलो र सफा देखिने खाद्य वस्तुहरुमा बढी विशाक्त प्रयोग भएको हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नसमेत उनले सुझाएका छन् । त्यस्तै ब्रोइलर कुखुराको मासु धेरै नखानसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । ब्रोइलर कुखुरामा धेरै एन्टीबायोटिक प्रयोग भएको र जेनेटिक मोडिफाइडसमेत भएकाले ब्रोइलर कुखुराको मासुको कम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै खसी-बोकाको मासुको उपभोग पनि कम गर्न उनले सुझाएका छन् । कोकाकोला, फेन्टालगायत पेय पदार्थ कम प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
दिनको एक-दुईवटा कागतीको सेवन गर्ने, पुदिना, भाङ, तिललगायत वस्तुबाट बनाइएका अचार तथा चटनी खाने बानीले रोगव्याधि कम गराउने उनले बताए । त्यस्तै धेरै प्रकारका मल प्रयोग भएका सागसब्जी, तरकारीहरुको प्रयोग नगर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन् । सादा खाना खान र शरीरभित्र कुनै पनि प्रकारको भार नपर्ने गरी खान पनि उनको सुझाव छ । शुद्ध पानी धेरै पिउने, गुर्जो, उमारेको जमरा, कागतीलगायतको सेवन गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनले बताए । त्यसबाहेक नियमित व्यायाम गर्दासमेत शरीरमा फाइदा पुग्‍ने उनको भनाइ छ । योग, खानपिन, आयुर्वेदका जडीबुटी र मनोविज्ञानका पक्षहरुमा सबैधन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।भाइरोलोजिस्ट डा. बाबुराम मरासिनीले दसैंका बेला सहर-बजारबाट आफ्नो घरमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । दसैंमा घर नजानभन्दा पनि घर गएपछि संक्रमणबाट जोगिन विभिन्‍न उपाय अपनाउन सकिने बताए । घरमा गएपछि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुनुभन्दा अलग्गै बस्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । खाना खाँदा दूरी कायम गर्ने, दसैंमा टीका लगाउँदा खुला ठाउँमा लगाउने, भिड नगर्ने हो भने रोग लाग्नबाट बच्‍न र बचाउन सकिने डा. मरासिनीको भनाइ छ ।
लिपस्टिक अर्थात महिलाहरुको सौन्दर्यको एक अभिन्न हिस्सा । ओंठको सौन्दर्य कायम राख्न लिपस्टिकको प्रयोग हुँदै आएको छ । अनुहारको मेकअपमा लिपस्टिक अनिवार्य जस्तै हुनेगर्छ । लिपस्टिकको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? कहिलेबाट सुरु भयो ? यावत् कुरा निकै घतलाग्दा छन्। त्यसैगरी लिपस्टिकसँग जोडिएका अन्य कुराहरु पनि निकै रोचक छन् ।सुरुका दिनहरुमा यसलाई लिपस्टिक भनिदैनथ्यो । विगतमा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनबाट लिपस्टिक तयार गरिन्थ्यो, त्यसमा केही फल, माटो र किराफट्यांग्रा समेत सामेल गरिन्थ्यो ।